Archives maka June 4, 2021
Ihe Nwere Ike WordPress Ihe ntinye maka gị?
Ọrụ nke WordPress emeela n'ezie ohere na-enweghị njedebe n'oge na-adịbeghị anya, na-ewere ya na ọkwa ọhụụ ọhụụ anaghịzi egbochi weebụsaịtị weebụ. Site na otutu ntanetị nke WordPress na-enye ugbu a, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-esonyere, ndị nwe saịtị nwere ike ịwụnye ibe ahaziri iche na nkeji ole na ole site na obere enyemaka.
WordPress plugins bụ ederede nke ọtụtụ ndị mmepe guzobere iji nye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ maka ibe saịtị ha. Enwere ike iji ngwa mgbakwunye WordPress gosipụta okwu ndị dị ugbu a, ma ọ bụ dịka ngwa ọrụ izere spam. Ihe ndebiri ndebiri nke WordPress na-egosi ịbụ ndị ama ama maka saịtị ndị akwadoro na mpụga, yabụ ịnwe ike ịgụnye ọtụtụ ọrụ na-eme ka WordPress plugins bụrụ isi iyi bara uru nke mmemme n'efu n'efu!
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ guzobere peeji nke saịtị WordPress iji kesaa akụkọ gbasara mmadụ na ibe ya, ịde blọgụ emechaala bụrụ akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa na ngalaba mgbasa ozi. Site na saịtị nnabata, ndị ọrụ WordPress nwere ike ịgụnye njikọ ahịa ma ọ bụ Adsense, ma kwalite ihe mgbakwunye. Ngwa mgbakwunye WordPress na-eweta ngwaọrụ pụrụ iche maka ịkọwa ụdị weebụsaịtị ndị a, yana tinye-ons n'ọtụtụ ọkwa nkewa nwere:
Management Adsense njikwa
Vert Mgbasa Ozi rotators
Ization Nchọgharị njin
Amachi na njirimara onye ozo
Ọbịa na pịa stats
Boxes Chọọ igbe
Tools Ngwa nyocha
Social na ibe edokọbara na mkpado (eg Technorati, Del.icio.us, Digg).
Ihe edeturu banyere WordPress.com na WordPress.org.
Ezie na a kpam kpam free WordPress blog saịtị ga-kwadoro na WordPress.com, imewe ndebiri na ekwekọghị dị ntakịrị na ndị ọrụ na-adịghị ekwe iso iso ahịa ma ọ bụ Mgbakwunye njikọ. WordPress.org n'aka nke ọzọ chọrọ ka ịnwe ngalaba nke aka gị na nnabata na ebe, agbanyeghị ọ ka mma maka ahịa na ọrụ ahịa, ma ọ bụ ebe a ka plugins WordPress batara na usoro ahụ!
Ndị nwe saịtị na-ejide onwe ha nwere ike ịrụ ọrụ dị mfe nke ịmepụta weebụsaịtị ha site na iji plugins WordPress, na -emepụta ibe ahaziri iche pụrụ iche iji dọta ndị ọbịa ha!
WordPress plugins bụ ederede nke ndị mmepe dị iche iche guzobere iji nye ndị ọrụ nhọrọ karịa maka ibe saịtị ha. WordPress ndebiri ndebiri na-egosi ịbụ ezigbo ewu ewu maka saịtị ndị akwadoro na mpụga, yabụ ịnwe ike ịgụnye ọrụ ndị ọzọ na-eme ka WordPress plugins bụrụ ezigbo enyemaka nke mmemme mmemme!
WordPress plugins na-enye ngwá ọrụ dị ịrịba ama maka ịhazi ụdị weebụsaịtị ndị a, yana mgbakwunye na ọkwa dịgasị iche iche gụnyere:
Nyere na e nwere nnukwu ọnụọgụ WordPress plugins iji kwado ụdị ọrụ niile, ọkwa ọkwa dị mkpa iji melite ụfọdụ n'ime ndị a dị iche. WordPress.org n'aka nke ọzọ chọrọ ka ịnwe ngalaba nke aka gị na nnabata na ebe, agbanyeghị ọ ka mma maka ahịa na ọrụ ahịa, ma ọ bụ ebe a ka plugins WordPress batara na usoro ahụ!